Iyo itsva vhezheni yeCentOS Atomic Host 7.5 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura CentOS Atomic budiriro timu yazivisa kuwanikwa kweshanduro nyowani yeCentOS Atomic Host inoshanda huya izvi ku mhando yayo nyowani 7.5 (7.1805) Izvi zvinoenderana neCentOS Linux 7 RPM uye kuteedzera izvo zvikamu zvevhezheni zvinosanganisirwa muRed Hat Enterprise Linux Atomic Host, iyi vhezheni yakagadzirirwa kumhanyisa midziyo yeDocker.
Icho chinangwa chekupa mushandisi yemahara "bhizinesi kirasi" software. Inotsanangurwa seyakasimba, yakagadzikana uye yakapusa kuisa uye kushandisa.
1 Nezve CentOS Atomic Host
2 Dhawunirodha CentOS Atomic Host 7.1805
Nezve CentOS Atomic Host
The cChinhu chikuru cheiyo Atomic Host Project ndeye Atomic Host , isina kuremerwa mudziyo OS iyo inoshandisa aya mazano. Izvi hazvichinjiki, sezvo chimwe nechimwe chazvo chine mufananidzo weinokwira repamusoro, ichibvumira kuendeswa kukuru. Zvishandiso zvinomhanya mumidziyo.
Iyo inomiririra system inotarisirwa kuburikidza ne rpm-ostree, yakavhurika sosi chishandiso chekugadzirisa bootable, isingachinjiki, uye bootable faira system miti kubva kumusoro kweRPM zvemukati. Izvi nezvimwe zvinoverengeka zvakaputirwa mumutemo weatomiki uyo unopa pinda yekubatana.
Iyo inovharawo Mamwe maturusi akakosha kumidziyo-yakavakirwa isingagadzirisike zvigadziriso, zvinosanganisira:
Cockpit iyo inopa kuoneka kune vako vatenzi uye yako sumbu remidziyo.
Mazhinji zvigamba uye zvinowedzera kuDocker kune zvirinani SELinux uye systemd kusangana.
Iyo Atomic Inosimudzira Bundle kufambisa kugadzirwa kwemidziyo yekushandisa.
CentOS Atomic Inotambira ine akasiyana siyana shanduro yezvivakwa ye64-bit (x86_64), 32-bit (i386), ARM64 (AArch64), PowerPC 64-bit (ppc64), PowerPC 64-bit Endian-inoenderana michina (ppc64le) uye ARM-hfp (armhfp).
En Iyi itsva vhezheni yeCentOS Atomic Host inosanganisira zvitsva pakati pazvo patinogona kuratidza zvikamu zvayo zvikuru:
CentOS Atomic Inobata 7.1805 Iyo ine iyo Linux kernel 3.10.0-862.3.2, iyo yakafanana neinowanikwa mune yapfuura vhezheni yeCentOS Linux 7.5 (1804).
CentOS Atomic Inotambira inotakura kuburitsa kutenderera zvinoenderana neRed Hat Enterprise Linux Atomic Host kuburitswa. Kamwe kana mafonti aburitswa, anovakwazve uye akaiswa mumifananidzo mitsva. Mushure mekunge mifananidzo yaedzwa neGIS uye ichinzi yakagadzirira, tinozvizivisa.
Dhawunirodha CentOS Atomic Host 7.1805
Kana iwe uchida kuisa ino sisitimu, iwe unofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chayo chekurodha unogona kuwana mufananidzo weiyo system, iyo chinongedzo ndeichi.
Mufananidzo uyu inowanikwa kuti iwe ushandise pane chero chinhu chemuviri muchina, pamwe neVirtualBox kana libvirt-yakamisikidzwa Vagrant bhokisi chaiyo michina, uye Amazon Machine kana QCOW2 mifananidzo yekuendesa iyo inoshanda sisitimu munzvimbo dzegore.
Kune avo vashandisi avo yatove neshanduro yeCentOS Atomic Host 7 yakaiswa pamakomputa avo uye ndiani anoda kuisa iyi vhezheni itsva ivo vanozokwanisa kugadzirisa kune yazvino vhezheni yesisitimu pasina kudikanwa kwekuiswazve.
Ichi vanozviita nekuita rairo inotevera, nekuda kweizvi ivo vanofanirwa kuvhura terminal uye zvinodikanwa kuti ubatanidzwe kunetiweki panguva iyoyo.
Kana izvi zvangoitwa, ivo vanofanirwa kungomirira zvese zvakafanira kumisikidza uye kugadzirisa mapakeji kuti atorwe uye aiswe pakombuta yavo.
Pakupera kwemaitiro aya zvinonyanya kukosha kuti vatangezve makomputa avo. Nekuita izvi, iwe paunotanga system yako zvakare, iwe uchaona kuti shanduko dzakaitwa dzatove kushanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo itsva vhezheni yeCentOS Atomic Host 7.5 yave kuwanikwa